शुटआउट@झम्सिखेल | कथा | कुमार नगरकोटी | दशैं साहित्य विशेष
मेरो कुरा ध्यानपूर्वक सुन्नुस् ।
सबैभन्दा पहिले त त्यो जुन ऐतिहासिक उपन्यास तपाइँ पढिरहनुभा’छ, त्यसलाई बन्द गर्नुस् । देशको वर्तमान पोलिटिकल्ली इनकरेक्ट हुँदा ऐतिहासिक उपन्यास तपाइँ कसरी पढ्न सक्नुहुन्छ ?
उपन्यासलाई डस्टबिनमा मिल्काइदिनुस् ।
यतिञ्जेल तपाइँ ऐतिहासिक उपन्यासको फगत एक पाठक हुनुहुन्थ्यो, अब पात्र बन्नुस् । म तपाईंलाई शुटआउट @ झम्सिखेल नामक थ्रिलर स्टोरीको मुख्य पात्र अर्थात् प्रोटागोनिस्ट बनाउँदैछु । चियर्स !
कथाकारिताको परम्परागत नियम तथा अवधारणालाई उल्लङ्घन गर्दै तपाइँ जस्तो ऐतिहासिक उपन्यासको रेगुलर रिडरलाई म यो फिक्सनल टेक्स्टको प्रोटागोनिस्ट बनाउँदैछु; यसलाई प्लिज गम्भीरतापूर्वक मनन् गर्नुस् । म तपाइँलाई एउटा महत्वपूर्ण मिसनमा पठाउँदैछु, आफूलाई धन्य ठान्नुस् ।
अब यस्तो गर्नुस् । यो ब्रिफकेस समात्नुस् ।
ब्रिफकेसमा के छ, ऐनमौकामा चाल पाइहाल्नुहुन्छ । त्यसको चिन्ता नलिनुस् । यो पिक–अप–भ्यानको साँचो हो, लिनुस् । पिउँदै गरेको स्प्राइट सिध्याइहाल्नुस् र यो क्याफेबाट बाहिरिनुस् । सरासर पार्किङ लटमा जानुस् । त्यहाँ कालो टोयोटा हाइलक्स तपाईंलाई नै पर्खिबसेको हुनेछ । ढोका खोलेर भित्र छिर्नुस् र गाडी स्टार्ट गरिहाल्नुस् ।
मेरो कुरा बुझ्दै हुनुहुन्छ नि !
गाडीभित्र तपाइँले आरामसित धुमपान गर्न सक्नुहुन्छ, नो प्रोब्लम ! म्युजिकल मूड भए, स्टेरियोमा बच्चु कैलाश, बियोन्से या नविन के. भट्टराईलाई निस्फिक्री सुन्न सक्नुहुन्छ । फुल् भोल्युममा । त्यसो त मन भए, कुनै बर्थ–डे गीत सुने पनि भइगो ।
बाइ द वे आज तपाईंको बर्थ–डे भन्या होइन ?
तपाइँलाई जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना छ । आफ्नो जन्मदिनमा आज जुन महत्वपूर्ण काम तपाइँ सम्पन्न गर्न जाँदै हुनुहुन्छ, त्यसलाई मानिसहरूले पछिसम्म सम्झने छन् । तपाइँको मुक्तकण्ठले प्रशंसा गर्नेछन् ।
गीत सुन्दै थापाथलीको पुल क्रस गरेर तपाइँ सीधै कुपण्डोलको उकालो लाग्नुस् । पुल्चोकको मूल सडक पछ्याउँदै लाबिम मलनेरको ओभरहेड ब्रिज पार गर्नुस् । जावलाखेल पुग्नु अगावै रातो मच्छिन्द्रनाथको रथ बनाउने चोकबाट दायाँ मोडिनुस् र पाँच सय मिटर जति अगाडि बढ्नुस् ।
तपाइँ कफी डिस्ट्रिक्ट पुग्नुहुनेछ । गाडीलाई अब मन्द गतिमा चलाउनुस् । किनभने तपाइँलाई सडकको दुवै किनारामा अवस्थित क्याफेज्बाट आउने कफीको मगमग बास्ना सुघ्न मन लाग्ने छ नि त !
कफीको इन्टोक्सिकेटिङ बास्नाले तपाइँलाई लठ्याउन सक्नेछ । आफ्नो कफी–लतले तपाइँको मनलाई, इन्द्रियलाई कुत्कुत्याउनेछ । परन्तु गाडी नरोक्नुस् । कफी पिउने तीव्र इच्छालाई मुल्तबीमा राख्नुस् । किनभने तपाइँ एउटा महत्वपूर्ण मिसनमा हिंड्नुभएको छ, तसर्थ मिसनलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुस् । कामकुरो एकातिर कुम्लो बोकी क्याफेतिर कदापि नगर्नुस् ।
कफी डिस्ट्रिक्ट पार गरेपछि एउटा चोक आउनेछ । चोकबाट बायाँ मोडिनुस् । करीब सय मिटर जति अघि बढेपछि तपाइँ सडकको बीच–ओ–बीच ठिङ्ग उभिएको याँमानको युक्यालिप्टसको रूखनेर पुग्नुहुनेछ । यहाँनेर केही सचेत हुनुस् किनभने अधिकांश गाडी यही युक्यालिप्टसको रूखमा ठोक्किने गर्छन् ।
रूखलाई सडकमै छाडी तपाइँ अझै आगे बढ्नुस् । विशाल पर्खालद्वारा घेरिएको कम्पाउण्डभित्र विशाल घर देख्नुहुनेछ । गाडी रोक्नुस् । त्यो मन्त्रीको क्वार्टर हो । तपाइँ छिर्ने त्यहीं भित्र हो ।
यहाँबाट करीब पच्चीस मिनेटमै तपाइँ त्यहाँ पुगिहाल्नुहुनेछ । तीस मिनेट नै राख्नुस् । आज शनिवार भएकोले उतिसारो ट्राफिक जाम नहोला ।
झम्सिखेलको उक्त मन्त्री क्वार्टरमा छिरिहाल्नुस् । गेटपालेले तपाइँलाई रोक्न सक्छ, सोधपुछ गर्न सक्छ । मेरो नाम लिनुस्, उसले तपाइँलाई सहजै भित्र छिराइहाल्छ । ऊ मेरै मान्छे हो, नो प्रोब्लम !
मन्त्री–क्वार्टरमा छिरेपश्चात् बैठक कक्षमा भने तपाइँले केहीबेर प्रतीक्षा गर्नुपर्ने हुनसक्छ । केही छैन, प्रतीक्षा गर्नुस् । प्रतीक्षाको फल मीठो हुन्छ, जगत यसै भन्दछ ।
बावर्ची फर्केर किचेनतिर या कतै गइसकेपछि बरु ब्रिफकेस खोल्नुस् । ब्रिफकेसभित्र मेरा पाण्डुलिपिहरू हुनेछन् । तिनलाई वास्ता नगर्नुस् । पाण्डुलिपिहरूमाझ एउटा म्याग्जिन फेला पार्नुहुनेछ । एउटा पिस्तोल फेला पार्नुहुनेछ ।
एउटा ह्यान्डसम बाबर्चीले तपाइँलाई कोल्ड कफी सर्भ गर्नेछ । उक्त बावर्चीलाई तपाइँले कतै देख्नुभएको थियो ! तपाइँलाई यस्तै लाग्नेछ । तर कहाँ–कता देख्नुभएको थियो ? कुनै फिल्ममा ? या तपाइँको आफ्नै सपनामा ?
फिल्म र सपनालाई गोली मार्नुस् । यस विषयमा धेरै नघोत्लिनुस् ।
बेलाबेलामा चिसो कफीको चुस्की लिंदै तपाइँले म्याग्जिनलाई पिस्तोलमा लोड गर्नुपर्नेछ । लोड गर्ने क्रममा पिस्तोलबाट क्लिक–क्लिक आवाज आउला । त्यो मेटालिक आवाजले बुकशेल्फमा मस्तसित निदाइरहेको बिरालोलाई जगाउला ।
परन्तु, त्यो कालो ढाडे बिरालो पुनः निदाइजाला । नो टेन्सन, एट अल् !
कफीको कुन्नि कतिऔं चुस्की लिनै लाग्दा बैठक कक्षमा मन्त्री र उसको सल्लाहकार देखा पर्नेछन् । तपाइँको बायाँ हातमा कफीको मग र दायाँ हातमा पिस्तोल हुनेछ । दायाँ–बायाँ केही नसोची सल्लाहकारतिर हतियार सोझ्याउनुहोला ।
मन्त्री भला मानुष हो । उसलाई पिस्तोल नताक्नुहोला । उसलाई इशाराले सामुन्नेको सोफामा बस्न भन्नुहोला । अनेक उट्पट्याङ सल्लाह दिएर मन्त्रीको दिमाग भ्रष्ट गर्ने सल्लाहकारलाई चाहिं कुनै पनि हालतमा नछोड्नुहोला ।
पहिलो गोली सल्लाहकारको भुँडीमा दाग्नु होला । भुँडी फुटेपछि ऊ भुँइमा डङ्ग्रङ्ग ढल्नेछ । घस्रँदै–घस्रँदै कफी टेबलसम्म आउनेछ । एस-ट्रे समात्नेछ र तपाइँलाई प्रहार गर्ने प्रयत्न गर्न थाल्नेछ ।
ठीक यही बेला तपाइँले दोस्रो पटक पिस्तोलको ट्रिगर दबाउनुपर्नेछ । दोस्रो गोली कोखामा लाग्नेछ । यति भएपछि सल्लाहकारको काम तमाम हुनेछ । विस्तारै घिटिक्– घिटिक् गर्दै उसको प्राणपखेरु उड्नेछ ।
सल्लाहकारको लासलाई तपाइँले घृणामिश्रित नजरले हेर्नुहुनेछ । उसको घिनलाग्दो मुहारमा थुक्नुहुनेछ । याद रहोस्, तपाइँले थुकेको थुक निजको मुहारमै पर्नुपर्नेछ । तपाइँको थुकाइले प्रतीकात्मक अर्थ राख्छ ।
गोली पड्केको आवाज सुनेर दुई जना मानिस केहीबेरमै हस्याङफस्याङ गर्दै बैठक कक्षमा प्रवेश गर्नेछन् । एउटाले नीलो रङको बेसबल क्याप लगाएको हुनेछ । र, अर्कोले रातो मफलर । उनीहरूले भुँइमा रगताम्मे भई ढलेको सल्लाहकार, सोफामा थुरथुर काँपी बसेको मन्त्री र तपाइँलाई पालै पालो काँतर नजरले हेर्नेछन् ।
मेरो कुरा तपाइँको खोपडीमा घुसिरहेको त छ नि !
कुरा यस्तो हो, बेसबल क्याप लगाउने मान्छे दलाल हो । त्यसले आजसम्म के–केको दलाली गर्‍यो भनिसाध्ये छैन, गनिसाध्ये छैन । रातो मफलरवाला चाहिं बिचौलिया हो । मन्त्रीका विश्वासिला पात्रहरू भनेका यिनै सल्लाहकार, दलाल र बिचौलिया हुन् । यसमा अचम्म नमान्नुस् । अधिकांश मन्त्रीहरूका आसेपासे भनेका यिनीहरू नै हुन् । अनौठो नमान्नुस् । यिनीहरूको पहुँच मन्त्रीहरूको बेडरुमसम्म भएकोमा आश्चर्यचकित नहुनुस् ।
आफ्नो काम गर्नुस् । बिचौलियालाई ठाउँको ठाउँ ठोकिहाल्नुस् । दायाँ–बायाँ सोच्ने कुरै छैन । गोली उसको छातीमै लागोस् । हरामखोरले ऐया, आत्थु, चुँ केही गर्न नपाओस् । एउटै गोलीले मुर्दारलाई मुर्दा बनाउनुस् ।
बिचौलिया फत्रक्क ढलेको देखेर दलालको सातोपुत्लो उड्नेछ । उसले प्यान्टमै मुत्नेछ । मुत चुहिएर निजको गोलीगाँठा हुँदै भुइँमा बग्दै बग्दै रगतमा मिसिनेछ ।
दलालको कञ्चटमा पिस्तोल तेस्र्याएर रगतमा लतपतिएको मुततर्फ इशारा गर्दै तपाइँलाई भन्न मन लाग्ला, “चाट्, त्यसलाई जिब्रोले चाट् ।” किन्तु त्यस्तो नीच हर्कत चैं बिर्सेर पनि नगर्नुहोला । हतियार छ भन्दैमा आफ्नो विवेक नगुमाउनुहोला । चाट्ने काम ऐनमौकामा बिरालोले गरिहाल्ला ।
दलालप्रतिको तीव्र आक्रोश र घृणा मत्थर पार्न बरु यतिखेर तपाइँ सिग्रेट पिउन सक्नुहुन्छ । एउटा सिग्रेट मन्त्रीलाई पनि दिंदा हुन्छ । दलालले तपाइँसित आफ्नो जीवनको भीख माग्नेछ । भीख मागेको खण्डमा उसलाई पनि सिग्रेट टक्र्याउनुस् । नयाँ खिल्ली दिइरहनुपर्दैन, तपाइँले आफ्नो जुठो सिग्रेट हस्ते गरे भइहाल्छ । मुला सिग्रेट पिएरै मरोस् ।
उसले बालबच्चा, जहानपरिवारको पनि कुरा गर्नेछ । तपाइँको खुट्टा ढोग्नेछ । ठीक यही बेला निजले तपाइँको खुट्टा समातेर याचना गरिरहँदा, सिग्रेटको अन्तिम कस तान्नुस् । र, उसको कञ्चटमै गोली प्रहार गर्नुस् ।
पोइन्ट ब्ल्याङ्क शटको मजा लिनुस् ।
दलालको लासलाई खुट्टाले पल्टाएर उत्तानो पार्नुस् । हातले चाहिं त्यस्तो अपवित्र शरीर कदापि नछुनुस् । एउटा खुट्टा उसको छातीमा बिसाउनुस् । यसो गर्न अति आवश्यक छ, किनभने दलालहरू खुट्टामुनि भएकै राम्रो ! मन्त्रीले यो दृश्य जरुर हेरोस् र उसले बुझोस् : दलाललाई शिरमा चढाएर जीवनमा ठूलो भूल गरिएछ । खुट्टामुनि हुनुपर्ने दलाललाई टाउकोमा राखेर देश र जनताप्रति गद्दार गरिएछ ।
त्यसपछि, अब कसो गर्नुस् भने यसो गर्नुस् । भर्खरै दिवंगतिएका त्रि–पुरुषका आँखाहरू खुल्लै हुनसक्छन् । तिनलाई बन्द गरिदिनुस् । अनि बाँकी कफी पिउँदै केही क्षण विश्राम गर्नुस् ।
विश्रामको समय बिरालोको हुनेछ । त्यो कालो जीव बुकशेल्फबाट झर्नेछ । पालैपालो लासहरूको मुख सुँघ्नेछ । भुइँमा लतपतिएको रगतलाई जिब्रोले चाट्नेछ । रगतले पेट भरिएपछि त्यो ढाडे बिरालो पुनः बुकशेल्फमा जानेछ । र, किताबहरूमाझ निदाइहाल्नेछ ।
कफीको अन्तिम चुस्की लिएपछि तपाईंले मन्त्रीलाई सोध्नुहुनेछ, “यी लासहरूप्रति तपाइँको एनि कमेन्ट ?”
दलालको लासलाई खुट्टाले पल्टाएर उत्तानो पार्नुस् । हातले चाहिं त्यस्तो अपवित्र शरीर कदापि नछुनुस् । एउटा खुट्टा उसको छातीमा बिसाउनुस् । यसो गर्न अति आवश्यक छ, किनभने दलालहरू खुट्टामुनि भएकै राम्रो !
शुटआउटको अवधिभरि तपाइँले बोल्ने भनेको यति मात्र हो । यही एक टुक्रा डाइलग मात्र हो । तपाइँको भागमा अरू कुनै डाइलग छैन । जति कम डाइलग उति बढी डाइलगको गुरुत्व ! बुझ्नुभयो नि !
“नो कमेन्ट” मन्त्रीले झिनो स्वरमा भन्नेछ, “वास्तवमा म त एक असल राजनीतिज्ञ थिएँ । सल्लाहकार, बिचौलिया र दलालहरूको दुष्चक्रमा फसेर म कमसल भएँ । दोषी त म नै हुँ । तपाइँ जानुस्, यी लासहरूको जिम्मा म लिन्छु ।”
त्यसपछि तपाइँले पिस्तोल मन्त्रीलाई नै हस्ते गर्नुपर्नेछ । तपाइँको सामु मन्त्रीले ल्यान्डलाइनबाट कसैलाई फोन गर्दै भन्नेछ, “मेरो हातबाट भर्खरै तीन जना मान्छेको बीभत्स हत्या भयो । तपाइँहरू तु. झम्सिखेलको मन्त्री क्वार्टरमा आउनुस् र मलाई पक्राउ गर्नुस् । म अहिले घटनास्थलमै छु । तपाइँहरूसमक्ष आत्मसमर्पण गर्न चाहन्छु ।”
घटनाक्रम बुझ्दै त हुनुहुन्छ नि ! घटनाको ट्विस्टबारे कुनै कन्फ्युजन भए अहिले नै भन्नुस् । पछि मौका मिल्ने छैन । यो शुटआउट मैले योजना गरे अनुसार कुनै अवरोध विना सम्पन्न होओस् भन्ने म चाहन्छु ।
ब्रिफकेस बोकी तपाइँ फर्कनै लाग्दा बैठक कक्षमा गेटपाले र बाबर्ची प्रवेश गर्नेछन् । तिनीहरू मेरै मान्छे हुन् । चिन्ता लिनुपर्दैन । नो टेन्सन, नो प्रोब्लम !
तिनीहरूलाई मन्त्रीले सोध्नेछ, “हत्यारा को हो ? यो शुटआउट कसले गरेको हो ?”
बावर्ची र गेटपालेले कुनै धक नमानी मन्त्रीसमक्ष भन्नेछन्, “हत्या हजुरले नै गरिबक्सेको हो । तसर्थ तपाइँ नै हत्यारा हो । यो शुटआउट हजुरले नै सम्पन्न गरिबक्सेको हो । हामीले खुद हाम्रै आँखाले देखेका हौं । हामी घटनाका प्रत्यक्षदर्शी हौं । साक्षी बस्न हामी तयार छौं ।”
अब त्यहाँ तपाइँले गर्नुपर्ने काम केही बाँकी हुने छैन । बैठक–कक्षबाट निस्केर सरासर पिक–अप–भ्यानमा गई बस्नुस् र गाडी स्टार्ट गर्नुस् । स्टेरिङ चलाउँदै स्टेरियो अन गर्नुस् । प्रेमध्वज प्रधान या सविन राई या मिरान्डा लाम्बर्टका सुमधुर गीत सुन्दै गाडी हाँक्नुस् । त्यसो त रब्बी शेरगिलको बुल्ला की जाणा मै कौण नामक सुफियाना गीत सुने पनि भयो, तपाइँको मर्जी ।
मैले प्रेस्क्राइब गरेका गीतहरूले तपाइँको मनमा लागेको रगतको दाग पखाल्न मद्दत गर्नेछन् । तपाइँले एक किसिमको ताजगी महसूस गर्नुहुनेछ । अहिले दिउँसोको ठीक ३:१७ बजेको छ । शुटआउट सम्पन्न गरीवरी ७ बजेभित्र त तपाइँ मेरोसामु हाजिर भइहाल्नुहुनेछ । म तपाइँलाई यही क्याफेमा पर्खी बसेको हुनेछु ।
मन्त्रीको सल्लाहकारलगायत बिचौलिया र दलाललाई हत्या गरेबापत तपाइँलाई – तहे दिल से शुक्रिया – अदा गरुँला । तपाइँले कल्पनै नगरेको बक्सिस् तपाइँलाई टक्राउँला । बर्थ–डे–केक काटौंला र एकुन्टा सेल्फी खिचौंला ।
तपाइँको जन्मदिन यसैगरी धुमधामले सेलिब्रेट गरौंला ।